လုပ်ငန်းတွေကို ဘာကြောင့် Digital Marketing Agency တွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်ကိုင်တာလဲ? -
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေကို Digital Marketing Agency နဲ့ ဈေးကွက်တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်တော့မယ်ဆိုရင် ဒီအချက် တွေကို သိထားသင့်ဖို့လိုပါတယ်…
ပထမဆုံးအချက် အနေနဲ့ သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းအတွက် Agency ကို မဆက်သွယ်ခင်မှာ Agency ကိုအပ်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ Objective တွေကို သေသေချာချာ မှတ်တမ်းပြုစုပါ။ သင့်ရဲ့ Website (သို့မဟုတ်) Page တွေမှာ လိုအပ်နေတဲ့ လိုအပ်ချက်ကို စေ့စေ့စပ်စပ် Research လုပ်ထားပါ။ လုပ်ငန်းအပ်ရခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဥပမာ – သင့်ရဲ့ Product ရောင်းအား ကောင်းလာစေချင်တာလား? ဒါမှမဟုတ် သင့်လုပ်ငန်း အတွက် Follower တိုးလူသိများလာစေချင်တာလား? စသဖြင့် အလုပ်အပ်လိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို သေချာဆုံးဖြတ်ပေးပါ။ ဒီလို သေချာဆုံးဖြတ်ပေးမှသာ Agency ဘက်ကလည်း Soultion သေချာ ရှာပြီး အကောင်းဆုံးသော ဝန်ဆောင်မှုကိုပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်လုပ်ငန်းရဲ့ Goal နဲ့ Objective အပေါ်မူတည်ပြီး Agency က လုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်
ချက်တွေကို အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းပေးပြီး လိုအပ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးမှာဖြစ်ပေမဲ့ သင့်လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်ချက်တွေကို သေချာစွာ ကိုယ်တိုင် Researching လုပ်ပေးပြီး လိုအပ်ချက်တွေကိုထောက်ပြဖို့လိုပါတယ်။ Agency ကိုအပ်ပြီး ရရှိလာတဲ့ Result နဲ့ မအပ်ခင်က ရရှိခဲ့တဲ့ Result တွေကို Review လုပ်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။
Posted by Min Thuta/ Sunday November 29th, 2020/ Blog/0Comment